Mahaliana momba ny finoana silamo sy ny fiarahamonina silamo
Nanontany ianao hoe: Manao ahoana ny laharan'ny firenena Islamika?
Sokajy: teolojia 0
Iza no firenena Islamika tsara indrindra eran-tany? Ny mponina silamo be indrindra ao amin'ny firenena iray dia any Indonezia, firenena misy 12.7% amin'ny silamo eran-tany,…
Iza no marina Eid Al Adha sa Eid ul Adha?
Ny Eid-ul-Adha koa dia azo soratana hoe ʾId al-Adha na Eid-ul-Adha. Matetika izy io no antsoina hoe Eid. Na izany aza, ny Eid dia afaka manondro fetibe hafa, Eid-ul-Fitr, izay mitranga amin'ny…
Valiny tsara indrindra: Inona no lazain'ny silamo momba ny fiderana?
Inona no lazainao rehefa misy midera anao amin'ny finoana silamo? Na izany na tsy izany, raha misy midera anao dia misaotra anao fotsiny, miampy hoe "alhamdulillah" (ny fiderana rehetra ho an'ny ...
Valiny haingana: Halal sa Haram ve ny vinaingitra?
Valiny haingana: Ny vinaingitra divay sy ny vinaingitra balsamika dia heverina ho Haram satria misy alikaola be dia be. Ny karazana vinaingitra hafa rehetra dia heverina ho Halal. dia…
Impiry i Moon no voalaza ao amin'ny CORAN?
Miresaka volana ve ny CORAN? Ny CORAN dia manantitrantitra fa famantarana an'Andriamanitra ny volana fa tsy andriamanitra. Inona no nolazain'i Allah momba ny volana?...
Fandrosoana inona no nitarika ny vanim-potoana volamenan'ny silamo?
Nandroso ny sehatry ny algebra, calculus, géométrie, simia, biolojia, fitsaboana ary astronomia ny mpahay siansa. Karazana zavakanto maro no niroborobo nandritra ny vanim-potoanan'ny Golden Golden, anisan'izany ny seramika, ny metaly, ny lamba, ny hazavana…
Shiita sa Sunni ve i Nizams?
Na dia Silamo Sunni aza i Asaf Jahs (Nizams), mpitondra tao amin'ny Fanjakan'i Hyderabad taloha, dia nanohy nanaja ny fankalazana ny Muharram izy ireo. Tamin'ny fotoan'izy ireo no nisy zanatany manokana…
Ny fanontanianao: Nahoana ny Kaaba no tsy sampy?
Isika silamo dia tsy mivavaka amin'ny sampy any La Mecque. Tsy ataonay hoe Idol akory. Izy io dia vato naorin'ny Mpaminany Mohammed tao La Mecque no tena tanjona…
Valiny haingana: Inona no lazain'ny Quran momba ny zon'ny vehivavy?
Ao amin'ny CORAN (SWT) masina dia nilaza momba ny zon'ny fanomezana ho an'ny vady i Allah. “Ary omeo fanomezana ho an'ny vehivavy ny vodiony. Avy eo, raha izy ireo…
Fanontaniana matetika: Iza amin'ireo mpitarika roa no niady haka ny tanàna masin'i Lameka tamin'ny Ottomans tamin'ny taona 1803?
Nitsangana ho fihetsiketsehana ara-pivavahana tao Dira'iyya ao Nejd izy ireo tamin'ny 1744-1745. Ny fotopampianaran'izy ireo dia nahitana olona vitsy an'isa tao amin'ny Hejaz, ary ny Mufti ao La Mecque dia nanambara…
1 2 ... 837 Manaraka
Bonne journée daholo e! Amir no anarako. Ity ny bilaogiko momba ny finoana silamo sy ny tontolo islamika. Hanana lahatsoratra momba ny finoana silamo ny bilaogiko avy amin'ny fomba fijerin'ny fivavahana, ary koa amin'ny fomba fijerin'ny siansa hafa toy ny fandalinana ara-pivavahana, sosiolojia, fandalinana kolontsaina, fiteny, sns., sns.
Afaka handravaka ny tranoko amin'ny Ramadany ve aho?
Ahoana ny fampiasana ny Bank Islam DuitNow?
Inona no mahatonga ny moske ho moske?
Inona no antony mahatonga ny fielezan'ny finoana silamo haingana?
Inona avy ireo sampana roa amin'ny finoana silamo?
Haram amin'ny finoana silamo ve ny mividy tapakila loteria?
Valiny tsara indrindra: Tsy maintsy manao hijab ve ianao raha sola?
MIJORO HO AN'NY MPITONDRA AZY! Ny fitaovana rehetra navoaka tao amin'ny tranokala dia natao ho an'ny tanjona fampahafantarana sy fanabeazana! Raha heverinao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fandefasana fitaovana rehetra, azafady mba hifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana dia hesorina ny fitaovanao!